မေမေ အလုပ်လုပ်နေချိန် အနားမှာ လာရှုပ်နေတဲ့ Ivy လေး – XB Media Myanmar
မေမေ အလုပ်လုပ်နေချိန် အနားမှာ လာရှုပ်နေတဲ့ Ivy လေး
နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်မလေး အေသင်ချိုဆွေ ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင် တစ်ဦးပါ။ သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေး Ivy ကလည်း ပရိသတ်တွေ ချစ်ရတဲ့ သူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ivy လေးက ခုဆိုရင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအယာလေးတွေပါလုပ်တတ်နေပြီ ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက ပိုပြီး ချစ်နရတာပါ။ ပရိသတ်တွေအတွက် အေသင်ချိုဆွေရဲ့ သမီးလေး Ivy လေး ရဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အေသင်က သမီးလေး Ivy ရဲ့ ပုံလေးတွေတင်ပြီး ” မေမေက အလုပ်လုပ် Vy_Vyက အလုပ်ရှုပ် ! ❤ဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ဘယ်သူတွေကပဲ တိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက် မေမေ့မှာ IVYလေးတစ်ယောက် ရှိနေရုံနဲ့ဘယ်အရာမဆို ရင်ဆိုင်သွားနိုင်ဖို့ လုံလောက်ပါတယ် ! ” ဆိုပြီး သမီးလေး Ivy ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Ivy လေးက မေမေ အလုပ်လုပ်နေချိန်မှာ အနားလာပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမူအရာလေးတွေနဲ့ မေမေကို စနေတာပါ။
အေသင်ချိုဆွေရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေး Ivy ရဲ့ ပုံရပ်ကလေးတွေကို ဆက်လက်ကြည့်ရူပေးကြပါဦးနော်။
Ivy လေးရေ ချစ်လိုက်တာ
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေး Ivy လေး ရဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ပရိသတ်တွေသဘောကျကြမှာပါ။ ကြည့်ရူပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
Source;athen cho swe